မေးမြန်းလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ | နည်းပြ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစည်းအရုံး
ကြှနျတေျာ့အသံသွင်းထက်ပို 45 မိနစ်ကြာမြင့်စွာများမှာအဘယ်အရာဆိုရငျကော
ကြှနျတေျာ့အသံသွင်းထက်နည်း 30 မိနစ်ကြာမြင့်စွာများမှာအဘယ်အရာဆိုရငျကော
အဘယ်သို့ငါငါ့ကိုတစ်ခုIAC® certified ရရှိထားပြီးနည်းပြဖြစ်လာကူညီပေးမည့်ဆရာနည်းပြသို့မဟုတ်နည်းပြကျောင်းတွင်ရှေးခယျြသလဲ?
ကျွန်မတစ်ဦးထက်ပို client ကို (စုံတွဲရဲ့နည်းပြ, အုပ်စုတစ်စုနည်းပြ) နဲ့တစ်မှတ်တမ်းတင်နည်းပြ session တစ်ခုတင်သွင်းနိုင်ပါသလား?
ကျွန်ုပ်မည်သို့နည်းပြ session ရဲ့မှတ်တမ်းစေသလော
ကြှနျတေျာ့အသံသွင်းကျော်လျှင်အဘယ်အရာကို 45 မိနစ်ကြာမြင့်စွာ?
အဆိုပါ 30 မိနစ်အမှတ်အသားသည်အထိ, (နည်းပြသူတို့ရဲ့သတင်းအချက်အလက်ကဤသို့ဆိုခြင်းနှင့်စွန့်လွှတ်နေ client တို့ကအပျေါမှာသဘောတူညီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်) အဆိုပါပိတ်ပင်စာမေးပွဲအဲဒီ session စတင်သောအခါအထံမှ 45-45 မိနစ်အပေါ်အခြေခံပြီးဂိုးသွင်း။
အဆိုပါလိုအပ်ချက်နည်းပြ 9-30 မိနစ်အတွင်း 45 ပိတ်ပင်နည်းပြMasteries®ပြ, 30 မိနစ်ထက်ဒီတော့တစ်မှတ်တမ်းတင်လျော့နည်းနေသမျှကာလပတ်လုံးဒီလိုအပ်ချက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်လက်ခံနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာသေချာသင်ဖတ်ပါနှင့်တွေ့ဆုံရန်ရှိသည်ဟုအောင် ညွှန်ကြားချက်များ။ Self-အကဲဖြတ်သင့်ရဲ့စေတနာအဘို့တစ်ခုမှာအစွမ်းထက် tool ကိုသင်လုပ်နိုင်သည်အဖြစ်သင့်အစည်းအဝေးများ၏အဖြစ်အများအပြားမှတ်တမ်းတင်, သူတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်သုံးသပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အစဉ်အမြဲတိုးတက်ဘို့ကြီးစွာသောကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ အဆိုပါ Mastery မှတ်ချက်-စာရွက်, E-စာအုပ်နှင့်သင်ကိုယ်တိုင်သွင်းယူဘို့တုံ့ပြန်ချက်လမ်းညွှန်သင်သည်သင်၏နည်းပြအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးနှင့်အတူပိုအဆင်ပြေ get ကူညီပေးပါမည်။
အဆိုပါIAC®၏အမာခံများသင်ယူခြင်းနှင့်တစ်ဦးချင်းစီနည်းပြအတွေ့အကြုံများအမျိုးမျိုးနှင့်အတူနည်းပြအလုပ်ကိုမှကြွလာသည်ဟုအသိအမှတ်ပြုမိမိတို့ထူးခြားသောချဉ်းကပ်ဘို့အနည်းပြဂုဏျတငျသျောလညျး, ငါတို့ရှိသမျှသည်နည်းပြ၎င်းတို့၏နည်းပြကျွမ်းကျင်မှုကြီးထွားခြင်းနှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီနိုင်မယ့်အကြံပြုလမ်းကြောင်းရှိပါဘူး။ ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကိုသင့်တိုးတက်မှုစီစဉ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်များအတွက် tool အဖြစ်တစ်ဦး Mastery Professional ကဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (MPDP) ဒီဇိုင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။
အွန်လိုင်းစမ်းသပ်မှုတစ်ခုနည်းပြအဆိုပါ Mastery ၏သီအိုရီများနှင့်အယူအဆရေးရာ application ကိုနားလည်ပုံကိုကောင်းစွာများစွာသောအတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းပြ session တစ်ခုမှာတော့သင် Mastery ကိုသုံးပါနှင့်လျှောက်ထားရန်သင့်စွမ်းရည်သရုပ်ပြပါ။
သာတရားဝင်လိုင်စင်ရှိငှားရမ်း။ ပိတ်ပင်နည်းပြ Mastery သုံးစွဲဖို့တရားမဝင်ဒါဟာဖြစ်ပါသည်® လိုင်စင်မရှိဘဲစီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များသည်။ အားလုံးလိုင်စင်ရှိအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနေကြတယ် လိုင္စင္အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ က်သင့္ေငြေပးေခ်ျခင္း.
အဆိုပါသင်တန်းဆရာ '' ကိုယ်ပိုင်နည်းပြသင်တန်းပေးခြင်းနောက်ခံနဲ့လက်မှတ်အထောက်အထားများနှင့် ပတ်သက်. မေးလျှောက်။
IAC®လိုင်စင်ကိုသင်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တင်သွင်းဖို့ရည်ရွယ်ထားနည်းပြအလုပ်ကိုအသံသွင်းရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့ခွင့်ပြုမထားကြောင်းသတိပြုပါ ရှောက်သွားဖွယ်ရှိ။ ယင်းအစားသူတို့က, Master နည်းပြများ၏လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်ရန်သင့်အားဆုံးမဩဝါဒပေးသငျသညျအသံသွင်းအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သွင်းယူဘို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းများ ပူဇော်. , သင့်ကိုယ်ပိုင်နှင့်အခြားသူများ '' အသံသွင်းအကဲဖြတ်ရန်ရန်သင့်အားသွန်သင်မည်။
အပြင်ဘက်တွင်ထောက်ခံမှုလိုအပ်သောမဟုတ်သလိုနေကြသောအဖွဲ့အစည်းများအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်™အောင်မြင်ရန်လိုအပ်မဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်IAC®ထံမှထောက်ခံမှုလေ့ကျင့်ရေးကျောင်းများလိုင်စင်ရ, ဒါမှမဟုတ်လေ့လာမှုအုပ်စုများအတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သင့်ရဲ့သင်ယူမှုမြှင့်တင်ရန်နှင့်အောင်မြင်မှုကသင်၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်ပေးဖို့အကြံပြုသည်။
အဆိုပါလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးကော်မတီလျှောက်ထား '' အသံသွင်းရှောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဖြစ်စေမအဆုံးအဖြတ်များအတွက်ပြည့်စုံခြင်းနှင့်အသေးစိတ်အမှတ်ပေးနည်းစနစ်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာနည်းစနစ်ကြိုတင်၎င်း၏လျှောက်လွှာမှပြည်တွင်းရေးကိုက်ညီမှုများအတွက်စမျးသပျခံခဲ့ရနှင့်ပိတ်ပင်စာမေးပွဲနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်တရားမျှတပြီးတသမတ်တည်းအမှတ်ပေးသေချာစေရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားလျက်ရှိသည်။
နှစ်ဦးကပိတ်ပင်စာမေးပွဲလွတ်လပ်စွာတစ်ခုချင်းစီကိုတင်သွင်းခဲ့တဲ့နှင့်ရမှတ်အဆိုပါနည်းပြ session ကိုပြန်လည်သုံးသပ်။
ငါဖမ်းယူရေးတင်ပြရန်နိုင်သလားတစ်ဦးထက်ပို client ကို (စုံတွဲရဲ့နည်းပြ, အုပ်စုတစ်စုနည်းပြ) နဲ့ ording နည်းပြ session တစ်ခု?
အမှတ်အဆိုပါပိတ်ပင်တစ်ဦးတည်းသာ client ကိုနှင့်အတူအသံသွင်းလက်ခံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်မည်သို့နည်းပြ session ရဲ့မှတ်တမ်းစေသလဲ?
သင်သည်သင်၏အသံဖမ်းရေးသားထားသောမှတ်တမ်းမှပြောင်း tools များသို့မဟုတ် app များကိုစာပို့ဆိုမိန့်ခွန်းကိုသုံးနိုင်သည်။
အဆိုပါမှတ်တမ်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ်နှင့်တစ်ဦးစကားလုံးဖိုင် .doc သို့မဟုတ် .docx အဖြစ်သိမ်းဆည်းရမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ဦးကြည့်ရှုရန် ကျေးဇူးပြု. ဒီနေရာမှာနမူနာမှတ်တမ်း။
[prev-button ကို prev-url = "https://certifiedcoach.org/certification-and-development/cmc_mmc_sub/" prev-ခေါင်းစဉ် = "CMC (နေကြသောအဖွဲ့အစည်းများ) နှင့် MMC တင်ပြမှုကို"]